Fahavaratra iray any amin'ny nosy Aland, eo anelanelan'i Suède sy Failandy | Vaovao momba ny dia
Fahavaratra any amin'ny nosy Aland, eo anelanelan'i Suède sy Failandy
Mariela Carril | | Failandy, mpitarika
Te hitsidika an'i Eropa Avaratra ve ianao amin'ity fahavaratra ity? Ny fahavaratra no fotoana mety indrindra amin'ny fandehanana etsy sy eroa tsy misy hatsiaka ary velona ny tontolo. Iray amin'ireo toerana hahaliana sy mahaliana indrindra azontsika tsidihina ny Ny Nosy Aland.
Ny Alands dia a faritra mizaka tena any Failandy toerana itenenana soedoà be indrindra .. Izy ireo dia miala sasatra eo amin'ny fidirana amin'ny Hoalan'i bothnia, any amin'ny Ranomasina BaltikaAry na dia misy nosy lehibe aza izay mifantoka amin'ny ankamaroan'ny mponina, dia misy nosy sy nosy an'arivony maro kokoa izay saika tsy misy olona mipetraka. Any ankoatr'izay, efa ho 40 kilometatra miala ny ranomasina malalaka, no morontsirak'i Suède. Noho ny fisian'ny rano be dia be ao aminy dia tsy tongatonga ho azy fa ny anarany amin'ny fomba norveziana taloha Tany misy rano.
1 Ny Nosy Aland
2 Fizahan-tany any amin'ny nosy Aland
Ny Nosy Aland
Tonga tany amin'ireny nosy lavitra sy mangatsiaka ireny ny olona, ​​fito arivo taona lasa izay, rehefa nipoitra indray ireo nosy avy tao anaty lalina rehefa tafiditra tao anaty ranomandry kontinanta nandritra ny vanim-potoanan'ny Ice. Ireo mpihaza sy mpangorona aloha, ny tantsaha taty aoriana, dia mbola nifandray tamin'ny Vikings avy izay nisy ny rava, fasana ary trano mimanda.
Tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo nampidirina tao amin'ny Empira Suède izy ireo ary avy eo natolotr'i Suède an'i Russia noho izany dia lasa anisan'ny Grand Duchy any Failandy izy ireo. Tamin'ny fotoan'ny ady Krimea dia teto ny anglisy sy frantsay ary taorian'ny naharesy an'i Russia dia nanjary nalemy ny nosy rehetra ary mbola mitohy mandraka androany. Tamin'ny 1919 dia nangataka tamin'ny fomba ofisialy ny olony hisaraka amin'i Failandy ary hiditra any Suède.
Tsy tafavoaka izy ireo saingy tapaka fa ny Nosy Aland dia faritra mahaleo tena sy mizaka tena, misy ny solontenany ao amin'ny governemanta failandey. Tsy natahorana akory izy ireo tamin'ny Ady Lehibe Faharoa. Androany dia manana ny fitombenany manokana, ny polisiny manokana, ary na ny fiaramanidiny manokana aza, Air Aland.
Fizahan-tany any amin'ny nosy Aland
Araka ny nolazaiko tetsy ambony ny ankamaroan'ny mponina dia monina ao amin'ny Nosy Fasta, toeran'ny renivohitra Mariehamn. I Fasta no nosy lehibe indrindra amin'ny vondrona ary manodidina ny arivo kilometatra toradroa fotsiny ny velarany. Ny toekareny dia miorina amin'ny sambo mpitondra entana, varotra ary fizahan-tany. Amin'izany lamina izany.
Fa miteny soedoà na finnish ve izy ireo eto? Miteny soedoà ny ankamaroanyIzy io no fiteny ofisialy ary fiteny voalohany mihoatra ny 90% amin'ny olona. Vitsy ny miteny failandey. Ahoana no ahatongavana any amin'ny nosy Aland? tsara amin'ny ferry. Ny ferry dia mampifandray ireo nosy amin'ny tanibe sy ny faritr'i Turunmaa Finnish. Ny tsara indrindra dia izany mandeha an-tongotra ny mpandeha. Eny, maimaim-poana! Raha mandeha amin'ny fiara ianao dia tsy maintsy mandoa vola kely ary manao ilay famandrihana mifanaraka amin'izany fa mandeha an-tongotra ianao satria mandeha maimaim-poana. Cool!
Ny vavahady mankamin'ny nosy dia ny tanànan'i Mariehamn, tanàna seranana mahafinaritra izay azo zahana amin'ny tongotra mora foana na amin'ny bisikileta manofa. Amin'ny bus ihany koa, fa tsy dia mahafinaritra. Mivoaka eo amin'ny seranana ianao ary mandeha 10 minitra dia tonga eo afovoany. Làlan-kaleha manintona no artery lehibe, voahodidin'ny hazo izy ary voaravaka tranobe taloha izay mampiavaka ny fiangonana St. Göran taloha. Ny mifanohitra amin'izay dia ny biraon'ny fizahan-tany mba hahafahanao mijanona ary manao fikarohana.
Ny ankamaroany ny fivarotana, kafe ary trano fisakafoanana dia miorina eo amin'ny arabe mpandeha an-tongotra ao Torggatan, ao amin'ny faritra afovoan-tanàna. Ity ny Parlemanta, ny lapan'ny tanàna ary tranobe governemanta hafa. Ary raha mahita ny sarivongan'ny vehivavy ianao dia makà sary, satria ho azy ny tanàna dia antsoina hoe Mariehamn: Tsarina Maria Aleksandrovna izany. Araka ny nolazaiko teo aloha dia tsara kokoa ny mandeha amin'ny fahavaratra satria maitso be ny tanàna ary afaka mankafy azy ianao zaridaina sy ny morontsiraka, ny seranan-tsambo sy ny marina.
Betsaka ny trano fisakafoanana sambo, fitsangantsanganana maro hatao amin'ny bisikileta na amin'ny sambo ary afaka mijery ny tanàna an-tongotra na manitsy ny rafitry ny fitateram-bahoaka. Misy bisy mandeha avaratra ary ny sasany mankany atsimo. Miasa isan'ora izy ireo amin'ny fahavaratra sy mandritra ny ora fiasana. 2 euro ny vidin'izy ireo ary mamela anao handeha manodidina hatrany. Ho fitsangatsanganana mahafinaritra kokoa dia azonao atao ny mitsangatsangana amin'ny fiaran-dalamby Röde Om, saingy amin'ny fahavaratra ihany izy io no miasa.
Fitsidihana mahaliana iray hafa koa ny Museum momba ny tantara an-dranomasina Aland izay miorina ao Västerhamn. Trano misy rihana roa natokana ho an'ny varotra an-dranomasina izay fehezin'ny nosy. Misy simulator sambo, sambo anglisy avy amin'ny 1936, noho izany dia miditra ao amin'ny tranon'ny kapiteny ianao ary mihetsika sy ny zava-drehetra, ary misy koa fampirantiana ny fahalianana izay fantatry ny tantsambo amin'ireo nosy avy amin'ny diany. Miampy traikefa ny milina, maodely mizana, hetsika ho an'ny ankizy. Tranom-bakoka voahevitra tsara tokoa io.
Ary ho an'io tapakila io ihany afaka mandeha mijery ny Pommern ianao, sambo vy misy andry efatra izay amin'ny toe-javatra tany am-boalohany. Mampiavaka an'izao tontolo izao izy ary isaky ny fahavaratra hatramin'ny 1957 dia tranombakoka no asany. Ity sambo naorina ao Glasgow ho an'ny orinasa alemanina ity dia natomboka tamin'ny taona 1903 ary novidian'ny tantsambo iray antsoina hoe Erikson, tompon'ny fiaramanidina lehibe indrindra manerantany. Nandeha an-tsambo mandra-pahatongan'ny 1923 ary nitondra voamaina teo anelanelan'i Aostralia sy Angletera.
Manaova mitaingina sambo no tokony hataonao raha te hahalala tsara hoe manao ahoana ny nosy. Ary satria maimaim-poana, dia saika mandatory amin'ny fomba fijerin'ny mpizahatany. Betsaka ny toerana itodiana: Föglö, Sottunga, Kökar, ohatra. Samy manana ny toetrany ny toerana alehany tsirairay, saingy tsy hiala aho raha tsy mitsidika ny sisa tavela amin'ny monasiteran'ny Franciscan taonjato faha-XNUMX ao Kötlar (adiny roa amin'ny sambo), na ny fipetrahan'ny vanim-potoana Bronze any Otterböte, ohatra, samy any Kökar.
Ny marina izany ny Nosy Aland tsara tarehy dia afaka manome topy maso antsika ny kolontsaina Nordic amin'ny ankapobeny, ny toetrany, ny sakafony sy ny tantarany. Eo anelanelan'i Suède sy Failandy izy ireo ary manana ny fakany amin'ny tantaran'ny Rosiana koa. Monasitera, trano mimanda, trano mimanda, ny sisa tavela etsy sy eroa. Ny tontolony voajanahary dia ahafahantsika mankafy traikefa an-kalamanjana toy ny fitsangantsangana, bisikileta, kayak na fisitrika anaty rano mangatsiaka. Mendrika holazaina ihany koa ny gastronomie satria ny menus miorina amin'ny trondro sy akorandriaka, ny labiera sy sôkôla vita amin'ny kakao entina avy any Amerika atsimo dia anisan'ny tokony hozahanao.
Raha tsy fantatrao ny Nosy Aland fa mahasarika anao izy ireo, dia mamporisika anao aho tsidiho ny tranokala ofisialin'ny fizahantany hanangona vaovao misimisy sy handamina ny dianao. Tsara ny tranokala ary manome anao fampahalalana azo antoka momba ny dia any sy eo anelanelan'ny nosy sy ny nosy, izay hohanina, inona no hatao, aiza no hatory, sarintany ary ny kalandrie feno hetsika. Tsidiho i Aland!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Failandy » Fahavaratra any amin'ny nosy Aland, eo anelanelan'i Suède sy Failandy
T amoron-dranomasina miboridana tsy hay hadinoina any Hawaii
Ny tantara tsy mampino an'ny katedraly Justo ao Mejorada del Campo